Nhengo dzeWOZA Dzorwara neMushonga Wadzinoti Wakasiiwa neMapurisa muHofisi Madzo
Nhengo dzeWOZA pfumbamwe pamwe nevatori venhau vaviri vekuNewsDay vanonzi vaendeswa kuchipatara vachirwara mushure mekunge vafema mweya usina kunaka wavanoti wakasiiwa pamba inoitirwa misangano neWOZA muBulawayo.
Mapurisa akapinda nechisimba pamba apa musi wa10 Chikumi akazobva mushure mekuge dare reHigh Court rati vabve neMuvhuro.
NeChipiri, vatungamiri veWOZA vanosanganisa Amai Jenni Williams naMuzvare Magondonga Mahlangu nevatori venhau veNewsDay, vakaenda kumahofisi aya neChipiri manheru vachibva vatanga kurwara.
Vanoti vakatanga kutadza kufema, kurutsa, kupera simba uye kuzarirwa. Chiremba ari kuvaona anoti izvi ndizvo zvaari kuona achiti naiye ari kushamisika kuti chii chiri kuitika kuvanhu ava. Imwe nhengo yeWOZA inonzi yakafenda ichionekwa nachiremba.
Muzvare Mahlangu vanoti vave kutyira hupenyu hwavo.
WOZA inotiwo mapurisa aya akasiya mabara epfuti uye zvinyorwa zvekukurudzira vanhu kuti vapandukire mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, sezvakaitwa kuEgyt nekuTunisia.
Mutauriri wemapurisa, Suprintendent Andrew Phiri, vati havana kunge vasumwa nezvenyaya iyi vakati titaure naAssistant Commissioner, Wayne Bvudzijena, avo vave kuti havachadi kutaura neStudio7 mazuva ano.
Hurukuro naMuzvare Magodonga Mahlangu